Street Smart ဆိုတာဘာလဲ? Book Smart ဆိုတာဘာလဲ?
Street Smart ဆိုတာဘာလဲ? Book Smart ဆိုတာဘာလဲ? အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြလေးတှကေို လလေ့ာကွရအောငျ။
“There is no doubt in my mind street smart kicks book smarts’ ass.” ဆိုတဲ့ ဆိုစကားတဈခုရှိပါတယျ။ လကျတှသေ့မားတှကေ စာအုပျသမားတှကေို အနိုငျတိုကျနိုငျတယျဆိုတာ သံသယဖွဈဖှယျမရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
ဒါဆို ဘာကွောငျ့ ဒီဆိုရိုးစကားလေးပျေါပေါကျလာရသလဲ ကို ဆနျးစဈကွညျ့ကွရအောငျ။
Street Smart (လကျတှသေ့မား)
လကျတှသေ့မားတဈယောကျဖွဈဖို့က အခွအေနနေဲ့အခြိနျအခါကို သုံးသပျနိုငျတဲ့စှမျးရညျရှိဖို့လိုအပျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲနလေဲဆိုတာကို သခြောသိရှိဖို့လိုအပျပါတယျ။ ပွောငျးလဲမှုတှကေို သိရှိနားလညျရုံသာမက ပွဿနာတှကေို လကျတှကေ့ကြ အောငျမွငျအောငျ ဖွရှေငျးနိုငျစှမျးရှိရပါမယျ။ ဒါက လကျတှဘေ့ဝနဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ကောငျးစှာတိုးတကျအောငျဆောငျရှကျခွငျးတဈမြိုးပါ။
Street Smart ဆိုတဲ့စကားလေးက တာဝနျတှေ၊ အလုပျတှေ၊ ဖတျမှတျထားတဲ့ ဗဟုသုတတှကေနေ ဆငျးသကျလာတဲ့ စှမျးရညျတဈရပျဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Street Smart တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ Book Smart တဈယောကျ အရငျဖွဈဖို့လိုအပျပါတယျ။ စာအုပျတှကေ ပေးတဲ့ ဗဟုသုတတှနေဲ့ ဘဝကပေးတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ပေါငျးစပျနိုငျမှ Street Smart တဈဦးဖွဈလာမှာပါ။
Book Smart ( စာအုပျသမား )
စာအုပျသမား ဆိုတဲ့အတိုငျး သူ့မှာ စာအုပျထဲက ရထားတဲ့ သီအိုရီတှေ၊ နညျးနာနိဿယတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဘယျလိုပွဿနာမြိုးကိုမဆို သူ့ရဲ့ဆရာသမား စာအုပျတှကေ ပွထားတဲ့ လမျးညှနျခကျြတှအေတိုငျး တဈသှမေတိမျး ဆောငျရှကျတတျတဲ့လူတှပေါ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့က ပညာရေးကဏ်ဍမှာတော့ သူမတူအောငျထူးခြှနျတဲ့ လူတျောလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ရဲ့ ပွဿနာကတော့ လကျတှဘေ့ဝ နဲ့ နညျးနညျး အလှမျးဝေးနတောပဲဖွဈပါတယျ။ စာအုပျသမားတှအေနနေဲ့ သတိပွုရမယျ့အခကျြကတော့ စာအုပျတှကွေားမှာပဲ နဈမသှားဖို့ပါပဲ။
Street Smart နဲ့ Book Smart တို့ရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေဘာတှလေဲ?
Street Smart တှကေ တဈသမတျတညျးဖွဈနတေဲ့အခွအေနတှေမှော ရှငျသနျနိုငျဖို့ခကျခဲပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဲ့လိုအခွအေနတှေမှော သူတို့ရဲ့ သဘာဝကို ပိတျပငျထားရလို့ပါ။
ပညာရေးနယျပယျက Street Smart တှအေတှကျ တဈခါတဈလမှော အဆိပျအတောကျဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူတို့က ကြောငျးနဲ့ဝေးဝေးပွေးခငျြကွသူတှလေညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ Street Smart တှရေဲ့ လိုအပျခကျြဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့လေးတှကေ ဆနျးသဈတီထှငျနိုငျစှမျးအပွညျ့ရှိကွပွီး စညျးမဉျြးတှကေို မနှဈသကျကွပါဘူး။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ အားသာခကျြလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
Book Smart လေးတှကေတော့ စာအုပျတှကေပေးတဲ့ Guideline တှနေဲ့ နညျးနညျးလေးကှာဟသှားတာနဲ့ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိဖွဈကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ သဟဇာတဖွဈအောငျရှငျသနျနိုငျဖို့အတှကျ သူတို့မှာ လုံလောကျတဲ့ အခကျြအလကျတှမေရှိကွပါဘူး။ ဒါက Book Smart လေးတှရေဲ့ အကွီးမားဆုံးလိုအပျခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့သူတို့လေးတှကေ စညျးမဉျြးစညျးကမျး တှကွေားမှာ ပြျောမှသေူ့တှဖွေဈတာကွောငျ့ အစိုးရအလုပျတှေ၊ ပညာရေးနယျပယျတှမှောတော့ ကောငျးကောငျးရှငျသနျနိုငျကွသူတှဖွေဈပါတယျ။
ဒါဆို Street Smart နဲ့ Book Smart ကို တှဲဖကျလိုကျကွရငျရော?
လူငယျတဈယောကျမှာလိုအပျတဲ့ အသိဉာဏျဗဟုသုတ နဲ့ အတှအေ့ကွုံ ဆနျးသဈမှုတှကေို ညီတူညီမြှ ပြိုးထောငျနိုငျမယျဆိုရငျ Street-Book Smart ဖွဈလာမှာပါ။ Book Smart ရဲ့ အားသာခကျြနဲ့ Street Smart ရဲ့ အားသာခကျြတှကေို သခြောပြိုးထောငျပေါငျးစပျထားတဲ့ လူငယျတဈယောကျက တော့ အားအကောငျးဆုံးဖွဈလိမျ့မယျထငျပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က စာအုပျထဲကရတဲ့ ဗဟုသုတတှနေဲ့ လကျတှဘေ့ဝကပေးတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ကောငျးစှာ ပေါငျးစပျအသုံးပွုနိုငျကွသူတှဖွေဈလို့ပါ။ ဒါကွောငျ့ အထကျကပွောခဲ့တဲ့ Street Smart က Book Smart ကို အနိုငျတိုကျနိုငျတယျဆိုတဲ့ စကားထကျ Street-Book Smart က အားအကောငျးဆုံးဖွဈတယျလို့ ဆိုခငျြပါတယျ။
အရေးကွီးဆုံးတဈခုတော့ရှိပါတယျ။ အဲ့တာက Street Smart မဖွဈခငျ Book Smart အဆငျ့ကို ကြျောကိုကြျောဖွတျရမယျဆိုတာပါပဲ။
Street Smart ဆိုတာဘာလဲ? Book Smart ဆိုတာဘာလဲ? အားသာချက်၊ အားနည်းချက်လေးတွေကို လေ့လာကြရအောင်။
“There is no doubt in my mind street smart kicks book smarts’ ass.” ဆိုတဲ့ ဆိုစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ လက်တွေ့သမားတွေက စာအုပ်သမားတွေကို အနိုင်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
ဒါဆို ဘာကြောင့် ဒီဆိုရိုးစကားလေးပေါ်ပေါက်လာရသလဲ ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်။
Street Smart (လက်တွေ့သမား)
လက်တွေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကို သုံးသပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲနေလဲဆိုတာကို သေချာသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုတွေကို သိရှိနားလည်ရုံသာမက ပြဿနာတွေကို လက်တွေ့ကျကျ အောင်မြင်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်။ ဒါက လက်တွေ့ဘဝနဲ့ အတွေ့အကြုံကို ကောင်းစွာတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတစ်မျိုးပါ။
Street Smart ဆိုတဲ့စကားလေးက တာဝန်တွေ၊ အလုပ်တွေ၊ ဖတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗဟုသုတတွေကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Street Smart တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် Book Smart တစ်ယောက် အရင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေက ပေးတဲ့ ဗဟုသုတတွေနဲ့ ဘဝကပေးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပေါင်းစပ်နိုင်မှ Street Smart တစ်ဦးဖြစ်လာမှာပါ။
Book Smart ( စာအုပ်သမား )
စာအုပ်သမား ဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့မှာ စာအုပ်ထဲက ရထားတဲ့ သီအိုရီတွေ၊ နည်းနာနိဿယတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးကိုမဆို သူ့ရဲ့ဆရာသမား စာအုပ်တွေက ပြထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်း တစ်သွေမတိမ်း ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့လူတွေပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့က ပညာရေးကဏ္ဍမှာတော့ သူမတူအောင်ထူးချွန်တဲ့ လူတော်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ပြဿနာကတော့ လက်တွေ့ဘဝ နဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်သမားတွေအနေနဲ့ သတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ စာအုပ်တွေကြားမှာပဲ နစ်မသွားဖို့ပါပဲ။
Street Smart နဲ့ Book Smart တို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲ?
Street Smart တွေက တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာ သူတို့ရဲ့ သဘာဝကို ပိတ်ပင်ထားရလို့ပါ။
ပညာရေးနယ်ပယ်က Street Smart တွေအတွက် တစ်ခါတစ်လေမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့က ကျောင်းနဲ့ဝေးဝေးပြေးချင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Street Smart တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လေးတွေက ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းအပြည့်ရှိကြပြီး စည်းမျဉ်းတွေကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Book Smart လေးတွေကတော့ စာအုပ်တွေကပေးတဲ့ Guideline တွေနဲ့ နည်းနည်းလေးကွာဟသွားတာနဲ့ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက် သူတို့မှာ လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေမရှိကြပါဘူး။ ဒါက Book Smart လေးတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့လေးတွေက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေကြားမှာ ပျော်မွေ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် အစိုးရအလုပ်တွေ၊ ပညာရေးနယ်ပယ်တွေမှာတော့ ကောင်းကောင်းရှင်သန်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို Street Smart နဲ့ Book Smart ကို တွဲဖက်လိုက်ကြရင်ရော?
လူငယ်တစ်ယောက်မှာလိုအပ်တဲ့ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ နဲ့ အတွေ့အကြုံ ဆန်းသစ်မှုတွေကို ညီတူညီမျှ ပျိုးထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် Street-Book Smart ဖြစ်လာမှာပါ။ Book Smart ရဲ့ အားသာချက်နဲ့ Street Smart ရဲ့ အားသာချက်တွေကို သေချာပျိုးထောင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်က တော့ အားအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က စာအုပ်ထဲကရတဲ့ ဗဟုသုတတွေနဲ့ လက်တွေ့ဘဝကပေးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကောင်းစွာ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ကြသူတွေဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ Street Smart က Book Smart ကို အနိုင်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားထက် Street-Book Smart က အားအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ အဲ့တာက Street Smart မဖြစ်ခင် Book Smart အဆင့်ကို ကျော်ကိုကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။
Read times Last modified on Monday, 25 January 2021 11:50